8 yeakanyanya kutaurwa nezve ezvakaitika zvemanoveli mazita panguva ino | Zvazvino Zvinyorwa
Ndasuwa nhamba yekutanga Mbiru yemoto, ivo Ken follet, iyo ichangobva kuburitswa uye yatove pamusoro pechinyorwa. Zvinotaridza kuti mamirioni evateveri vemunyori weWales aive akamumirira nemoyo wese. Asi kune mamwe mazita ari munzvimbo dzekutanga dzevakanyanya kutaurwa izvozvi mu nhoroondo yenhau. Ndakachengeta izvi Mabhuku e8, kubva pazvinhu zvitsva kusvika kuzvinyakare.
1 Vanashe vekuchamhembe - Bernard Cornwell
2 Imba yeMwedzi - Weina Dai Randel
3 Kunyemwerera kweWolf - Tim Leach
4 Iyo Knight yeWhite Boar - José Javier Esparza
6 Iyo saga yeakareba-kurarama - Eva García Sáenz de Urturi
7 Kaputeni weGungwa neHondo - Patrick O'Brian
8 Ndichaponesa hupenyu hwako - Joaquín Leguina naRubén Buren
Madzishe ekuchamhembe - Bernard Cornwell
Chechitatu bhuku musaga re Saxons, Vikings uye Normans de Bernard Cornwell, munyori ane mukurumbira wechiRungu, musiki wepfuti Richard Sharpe uye tenzi weiyo genre. Gara mu viking kupinda yeGreat Britain panguva yekutonga kwa Alfred Mukuru, iyi yakateedzana zita remusoro rakaburitswa muna2008.
Iye protagonist ndiye Uhtred Ragnarson, dzimwe nguva inozivikanwa seUhtred Uhtredson. Akazvarwa muNorthumbria, anotorwa uye anogamuchirwa nemaDanes. Vanomudzidzisa semumwe wavo. Mune ino novel Uhtred dzokera kuchamhembe mushure mekubatsira Alfred kushandura Wessex ive yakazvimirira Saxon umambo. Anoda kutsvaga hanzvadzi yake yekurera, asi uri munzira uchamhanyira munyika dzine mhirizhonga nehondo.
Chaizvoizvo saga iyi zvakare ine kuchinjika kuchangoburwa seterevhizheni kubva pazita rako rekutanga, Hushe hwekupedzisira.
mwedzi, S Palace - Weina Dai Randel
Yaiva iyo yekutanga novel wemunyori wechiChinese. Isu tiri mu gore 631 uye protagonist, mei, uyo anogara nemhuri yake chinyararire, asi nekuda kwemamiriro ezvinhu, anozove chikamu che vakadzi vevarongo yemuzinda wamambo. Iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekuyedza tora mambo. Uye achazviita nenzira chete yaanoziva nayo: nehunhu hwamuita akadzingwa pakati pevamwe varongo.
Kunyemwerera kwemhumhi - Tim Leach
Zvichiri mukutengesa nekuti haina kuburitswa kusvika Gumiguru 26. Leach akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeWarwick, kwaanogara uye anodzidzisa zvekunyora kunyora.
Imwe nyaya na vikings ine protagonist, nyanduri Isina Kirián. Iye neshamwari yake Gunnar, murwi wekare wechiViking akagara muIceland, vakaenda kuuraya chipoko iyo yakashungurudza purazi rakavakidzana. Asi kwaive kunyepa uye vakauraya munhu. Imhosva iyi, mu XNUMXth century Iceland , isina madzimambo kana madzishe, raigona kungosukwa nesirivha kana neropa. Kana kutarisana ne mhandu ane mhumhi kunyemwerera.
Iyo Knight yeWhite Boar - José Javier Esparza
Mutori wenhau uye munyori, munyori weanopfuura makumi maviri enhoroondo enhau, akaburitsa ino in 2012. Anotaura nyaya ya Zone, iyo mumakore ekupedzisira e XNUMXth century wenguva yedu, anoyambuka makomo eCantabrian nemhuri yake mukutsvaga nyika iri nani. Asi ivo vanoziva kuti vanogona kuzviwana ivo pachavo vapambwa nevaMuslim kana kupedzisira vave varanda mumusika mukuru weCórdoba. Maavatat ako achave vatungamiri veReconquista.
Iyo spartan - Javier Negrete
Uyu akapedza kudzidza muClassical Philology anorima zvakanyanya mhando dze fungidziro uye sainzi ngano. Asi akanyorawo inoverengeka erotica kubudirira.
Zvakare mukutengesa kusati kwasvika kusvika kupera kwemwedzi uno, nerino novel rinoenda kune gore 480 BC C. Mambo Leonidas, vasati vafa muhondo yeThermopylae, tumira tsamba kumukuru naPerseus uye anomuraira kuti adzokere kuSparta uye agopa mukadzi wake, Gorgo. Asi muchokwadi Perseus ndiye mwanakomana waMambo Damarato, uyo, akabatwa mumuzinda wamambo, akarasikirwa nekodzero yechigaro uye anofanirwa kudzidza kurarama semurwi ari nyore.
Saga rekare - Eva García Sáenz de Urturi
En 2012 ino novel yakaburitswa yaive imwe yeiyo kutengesa kukuru uye zvakakosha zviitiko. Nhoroondo uye hukama hwe yakagara Iago del Castillo, nemakore 10.300 XNUMX, uye Adriana, mudiki uye akatsunga prehistorian uyo anodzokera kune yake yekuzvarwa Santander, akabhadharwa nemuziyamu kwaanoshanda, achiri mukurumbira.
Kaputeni wegungwa nehondo - Patrick O'Brian
A classic of Classics. Chekutanga zita mune akateedzana yemakumi maviri nenoverengeka yakanyorwa naBritish tenzi wemumvura yemasaini genre. Nyeredzi kaputeni Jack Aubrey uye zvakasikwa uye musori Stephen Maturin, ivo vachiri zvinokosha kune avo vanozvirumbidza pakuva vanoda nhoroondo yenhoroondo.
Mune ino novel yekutanga isu tiri Mahon, muna Kubvumbi 1800, zvizere napoleonic hondo pakati peGreat Britain neFrance. Ikoko, panguva yekonzati, Dr. Stephen Maturin vanosangana ipapo-Lieutenant Jack Aubrey. Yevatambi savakasiyana sezvavanopesana, hushamwari hwavanozovaka huchagara nekusingaperi.
Ndichaponesa mweya wako - Joaquín Leguina naRubén Buren
Musi waChikunguru 5 ino novel yakakunda iyo Alfonso X El Sabio Historical Novel Mubairo muchinyorwa chayo chegumi nematanhatu. Yakanyorwa tandem naLeguina na Buren, inotaurira hupenyu hwe Melchor Rodriguez, anarchist inozivikanwawo se «Ngirozi tsvuku', Iyo yakaponesa hupenyu hwakawanda munguva ye Civil War uye kuti ndisekuru vaBureni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 8 yeakanyanya kutaurwa nezve ezvakaitika zvinyorwa zveinovel zvinyorwa izvozvi